मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन…के गर्ने होला ? – Sanjal Nepal
Homeरोचकमेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन…के गर्ने होला ?
December 1, 2020 admin रोचक 6424
म टिना ,१८ बर्ष को भए । केटा हरु देख्दा एक प्रकार्को ईमो आउछ । झन सर्टलेस केटा हरु देखे भने झनै ईमो आउछ । ल स्टोरी तिर जुम्, एक दिन साथी ले उस्को डेड्-म्म नहुँदा मलाई घर मा साथी दिनु भनेर बोलाई । म पनि घर्मा भनेर साथीको घर गए । साथी र उस्को दाजु रैछ घर मा ।
दाई चै गोल खेल्नु जानु भको रोइछ । मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ । साथी दोकान गकी थि भरै पढ्दा निन्द्रालाग्छ भनेर चिप्स हरु लिनु, म खाना बनाएर बसिराथे दाई आउनु भो । गर्मिले होला भेस्ट खोल्नु भाथियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरै भएछु बडी एक्दम से’क्सी थियो । कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ । मैले आघिनै भने, आनी दाई नुहाउन लाई बहिर कल मा जानुभो ।
म झ्याल बाट हेरी रहे दाई नुहको मलाई गएर दाईको सारीर रगड्न मन थियो तर क गर्ने मिलेन तेसो गर्न, तेइ भएर हेरेरै चित्त बुझाए । दाई नुहाई सकेर भित्र आउनु भो अनि के हेरे को फुच्ची त्यसरी आरु नुहको हेर्नु हुँदैन भन्नु भो । म त लाज्ले भुतुक्कै भए आब क भन्ने भनेर । अनि म पनि क कम्, आरु नुहाको कस्ले हेर्या छ र ? तपाईं नुहको पो हेरेको त ।
दाई टावेल मात्र बेर्नु भाथियो अनि बडी भरि पानी को थोपा हरु हेर्दै सेक्सी एन्ड हट देखिनु भाथियो । तेस्तो हेर्न मन भए रूम्मा आउ भन्नु भएर दाई रूम म जानु भो, मलाई क भो लाज नै हरायो म पनि दाई को रूम म गए । दाई छक्क पर्नुभो, जिस्के को पो त फुच्ची त साच्ची आको भन्नु भो । म के भनुम भनुम भो आनी ढाटुवा भने छु तेस्पछी दैले लु हेर फुच्ची भन्नु भो,,,,,,,,,,, अबुई! कत्रो रैछ दाइकोत रतो-रतो लामो एन्ड मोटो । मत देखेर सीक भए छु,,,,,,,,, मत देखेर सी’क भए छु,,,,,,
त्यतिकैमा साथीनी आई अनि दाईले आझै हेर्ने भा राती सुत्ने बेलामा आइज भन्नुभो । म बाहिरा निस्के । आनी साथी ले खाना खाएर पढ्नु पर्छ भनेर छिटै खाना खायुम । मलाई दाई को आगाडी कस्तो लाज लाई रा थियो । हामी खन्-पिन सकेर पढ्न बस्युम्, मेरो ध्यान दाई कै सारीर को अङ्ग अङ्ग्मा गैराको थियो पढ्नुनै मन लागेन ।
साथी कती खेर सुत्छ र मलाई दाई को मा जुम भकोथियो । रात को तेस्तै १० बजोआनी साथीले आब सुत्युम भनो मलाई क्या खुशी लाग्यो आनी साथी सुती अनि म दाईको रूम म गए । दाई चुरोट तान्दै बसिरनु भकोरैछ । म आए पछी रिसाउदै कती ढिलो आको भन्नु भो । तलाई वेट गर्दा गर्दा १ प्याकेट चुरोट सिद्दो भन्दै हुनुन्थो, म त दाइको सारीर तिर मात्र ध्यान दिदैथिए सचिनै धेरै चु’रोट खानु भएछ थुटा हरु टन्नै थियो टेबलमा । आईज बस भन्नुभो मलाई अप्ठयारो लगो ।
किन लजाउछस भनेर तानेर हग गर्नु भो । त्यो नङ्गो बडी म हग गर्दा तातो फील भो मलाई । अनि बिस्तारि किस गर्नु थाल्नुभो,,,,, मेरो नि लुगा खोलेर आफु जस्तए न ङ्गै बनाईदिनु भो । अनि मेरो कपाल समातेर मेरो मुख उस्को ….. मा दल्नुभो । । मैले के गर्नु भको यस्तो भन्दा,,,, चुसाउन लगेको मजाले चुस पो भन्नुभो,,, मैले चु स्दिना भन्द झन दरो समतेर उस्को … मेरो मुख्मा कोचारनु भो
भरै त मलाईनी मजा आयो मैले नै दाइको … समतेर चुस्न थाले । दाईले मेरो … को टु’प्पो चिमट्दै … माड्-मुड गर्न थल्नुभो म का मुक हुन थले झन जोड्-जोड्ले माड्-मुड गर्न थल्नु भो । म बेहोसी झै भै सकेको थे । झन दाइले मेरो ….सुम्सुमाई दिदा त म सल्याक्कै भाको थे । दाई ले मलाई हग गर्दै बेड मा पल्टाउनु भो अनि म माथी चडेर मेरो खुट्टा फ्या पारेर दाई ले उस्को लामो-रातो-मोटो …. मेरो सानो ….म जबर्जस्ती छिराउनु भो ।
मैले आइया ! भनेर काराएछु दाइले मेरो मुख उस्को एउटा हात्ले छोपेर…. थाल्नु भो । एक्दम वाइल्ड वे बाट । ब्ल ड नि निस्कियो ,,,,,,, म त मरे जस्तै भाको,,,,,,,, एक्छिन्मा त मजा आयो । त्यस पछी मलाई घोप्टो परेर पिछाडी बाट गर्नु थल्नुभो मेरो ….पड्काउदै । चाक रतै हुनेगरी पड्काउनु भएछ तर पनि मज्जा आउदो रैछ ।
तेस्तै ३० मिनेट पछी …. निकालेर कपाल समातेर मेरो मुख मा… छिराउनु भो । म त फेरी चुसाउनु आट्नु भएछ भनेकोत । एक्छिन सम्म लाडो मेरो मुख मा राख्नु भो । मलाई सास फेर्न नि अफ्ठेरो भैरा थियो एक्छिन मा त तातो भो मुख । दाईले मेरो नाख नि बन्द गरिदिनु भो । नाख बन्द भएपछी त त्यो तातो पानी साब निले छु । अनि मात्र मुख बाट …. झिक्नु भो अनि हाँस्दै कस्तो रैछ टेस्ट भन्नु भो ।
मलाईत डर लाग्यो अब क हुन्छ होला भनेर । अनि दाई ले हग गर्दै केइ हुँदैन फुच्ची भन्नु भो । हामी एक्-अर्काको चु स्दै खेलाउदै निदाए छौ । बिहानको ३ बजी मात्र बिम्झिए अनि मेरो लुगा बोकेर निस्किनु लागको फेरी दाई ले समतेर राती झै गर्नु थाल्नु भो अनि फेरी मुख मा झरेर दाई सुत्नु भो म चै लुगा लगाएर साथी को रूम मा आएर सुते । लाईफ को पहिलो से’क्स साथी को दाई सँग मज्जा आयो । बिहान उठेर , चिया खाज खाएर साथीले नै उस्को दाई लाई भनेर मलाई घर सम्म पुराई दिनु भो……..हाम्रा अन्य समाचार पनि पढ्नुहोला…
ओठ*बाट पत्ता ल’गाउन स’किन्छ म’हिला’को…..गोप्य र’हस्य।
शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला लाई छोड्दै नछोड्नु यस्तो छ रहस्य….
February 9, 2021 admin रोचक 2380
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई लक्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गरिएमा त्यो घरमा शान्ति छाउँदै । ज्योतिष
युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? जानी राखौं !
November 2, 2020 admin रोचक 9436
एजेन्सी – युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? भनेर गरिएको एक सर्बेक्षण मा युवतीहरुको जबाफ सुनेर सब चकित पर्ने एक तथ्य सार्बजनिक भएको छ। धेरै युवती हरुले सर्बप्रथम पुरुषको प्रसनालिटिमा आखा जाने
दैविक शक्ति अकला देवी मन्दिर जहाँ आफै शंखघण्ट बज्छ
November 26, 2020 admin रोचक 4608
नेपालको गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका ३, किलचोकमा अवस्थित श्री अकला देवीमा रहेको मुर्ति बनावटी नभई त्यही रहेको शीलामा शिंह र नन्दीको आकृति रहेको छ । मन्दिर भित्र भएको विशाल शीलालेखलाई नै आद्यशक्तिको रुपमा
LEX 18 agenda conversation: Job club (486376)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458483)
Hello world! (384488)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351995)